သိင်္ဂီနွယ်ရဲ့ မှတ်စုစာအုပ်: အမှတ်တရ...
၁၉၈၈-ခုနှစ်ရဲ့ မတ်လ ၁၁-ရက်နေ့...
အဲဒီနေ့က ကြို့ကုန်းက ရန်ကုန် စက်မှုတက္ကသိုလ်ဝင်းထဲမှာ စည်ကားနေကြတယ်လေ..။ စုပေါင်း သွေးလှူပွဲ ရှိတာကိုး။ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေလည်း စိတ်အားထက်သန်စွာ ကိုယ့်သွေးတွေကို ပေးလှူခဲ့ကြတယ်..။ (အဲဒီနေ့ သွေးလှူပွဲကတော့ ၀မ်းမြောက်စွာနဲ့ပေါ့...)
ကျမလည်း သွေးလှူဖို့ ရည်စူးထားခဲ့လို့ အဲဒီ အလှူပွဲ ၀င်နွှဲခွင့်ကြုံခဲ့သေးပါတယ်.... အဲဒါ ပထမဆုံးအကြိမ်နဲ့ နောက်ဆုံးအကြိမ်များတောင် ဖြစ်မလားမသိ...။ ပြီးတော့ သွေးလှူရှင်တံဆိပ်လေးတစ်ခုရယ်.. သွေးလှူမှတ်တမ်းကဒ်လေးရယ်.. ကြက်ဥပြုတ်လေး တစ်လုံးရတာတော့ မှတ်မိနေခဲ့တယ်...။
ပြီးတော့ အဲဒီ သွေးလှူရှင်တံဆိပ်ကလေးကို တစုံတယောက်ကို မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးခဲ့လိုက်တယ်... အဲဒီနေ့က သူ့ မွေးနေ့ပါ.....။ သူ့မွေးနေ့မှာ ကိုယ်ရည်စူးလှူဖြစ်ခဲ့တဲ့ သွေးအလှူဟာ လိုအပ်နေတဲ့ တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ရင်.. သူရော ကိုယ့်အတွက်ပါ မွန်မြတ်တဲ့ အလှူဖြစ်စေဖို့ပါ...။
သွေးလှူပြီးပြီးချင်းပဲ ရန်ကုန်ကနေ မိဘတွေရှိတဲ့ ပဲခူးကို လိုင်းကားနဲ့ ပြန်လာတော့ ခေါင်းတွေ တအားမူးနေလို့ မရပ်နိုင်ပဲ အတူလိုက်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ လက်ကိုတွဲ ကားကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေခဲ့ရသေးတယ်...
အဲဒီက အပြန် ကျောင်းပြန်တက်တော့ .. တစ်ဆယ့်သုံးရက်နေ့... ကျမတို့ရဲ့ ကျောင်းသားဘ၀တွေမှာ... အပျော်တွေ ပျက်သုဉ်းပြီး အမှောင်ထု ကြီးစိုးခဲ့ရတော့.. မှတ်မှတ်ရရပါပဲ...။
အခုချိန်မှာ သွေးလှူရှင် တံဆိပ်လေးလည်း ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပေမယ့် အနှစ်သာရနဲ့ အတိတ်က အရိပ်တွေကတော့ ကျန်နေဆဲပါ...။
သွေးလှူရှင်တံဆိပ်ကလေးကို လက်ခံမိပြီး အခုတော့ ပိုင်ရှင်အပြင် ကလေးသုံးယောက်ကိုပါ ကြည့်ရှူ စောင့်ရှောက်နေရတဲ့ အိမ်ဦးနတ်ကို ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ချမ်းသာ ကျန်းမာစွာနဲ့ ဒီမိသားစုလေးကို ဆထက်တိုးပြီး စောင့်ရှောက်နိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ နောက်ဆုံးပန်းတိုင်ကို ခရီးအရောက် လမ်းမပျောက်ပဲ အရောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ...လို့ မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်နော်..။
ဟုတ်ကဲ့.. မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ အတူ လမ်းကြုံလိုက်ရတာပေါ့...။
Posted by tg.nwai at 12:50:00 AM
Happy Birthday ပါမမtg ရဲ့ကိုငယ်
မသိင်္ဂီ...သူ့ကိုပေးတဲ့ မွေးနေ့လက်ဆောင်က အဓိပ္ပါယ် ရှိလိုက်တာ... Happy birthday!
မွေးနေ့ရှင်နဲ့ မိသားစုအားလုံး ထာဝရငြိမ်းချမ်းပျော်ရွှင်ပါစေ...
့happy birthday ပါ တီဂျီရဲ့ ကိုငယ်.
မေအောင်. မဂ်လာပါ။ တီဂျီ. ကာကာ အားလုံးမီယာ နဲ့တကွ. happy party..
မသိဂီ င်္ ရဲ့ ကိုငယ်
သိင်္ဂီ ရဲ့ ဘ၀လက်တွဲဖေါ် မိတ်ဆွေကောင်း
မွေးနေ့မှာ မိသားစုနဲ့အတူတူ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့ပါစေ...
မသိဂီ င်္ ရဲ့လေးစားစရာကောင်းတဲ့ ဆုတောင်းနဲ့ တင်
သိဂီ င်္ရဲ့ လက်တွဲဖော်
ပျော်ရွှင်သော မွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကို
သိင်္ဂီ နဲ့ ကျော်ငယ်...
Ko Nge said...
Thanks to all for wishes and reading thought of May Lay .
May Lay, as time goes by, i found more love, care, kindness and mitta from u.
yours Ko Nge
ဟီးဟီး အားလုံးပြည့်စုံနေလို့ ဘာဆုတောင်းပေးရမလဲမသိတော့ဘူးနော်။
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ပါစေ ဦးဦးရေ
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ဒီမိသားစုနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်
တားငယ်လေး ဖိုးဂျယ်မှ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်။
မမ tg ရေ
ခုလို အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော မိသားစု ဘ၀လေး အမြဲတမ်း ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ။
အကို့ရဲ့ မွေးနေ့မှသည် အမတို့ မိသားစုတွေအားလုံး ပျော်ရွှင်အေးချမ်းကြပါစေ...
အကိုကြီးရဲ့ xxမြောက်မွေးနေ့ မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်း ရာထောင်သောင်းတိုင်အောင် ချစ်ဇနီးချောလေးရယ်၊ သားသားမီးမီးလေး ၃ယောက်ရယ် ဝေေ၀ဆာဆာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေလို့ … မ ရေ… ကျောင်းက သွေးလှူပွဲဆို သူများကို အားပေးဖို့ရောက်ဖြစ်တယ်… ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့ သွေးအားနည်းတတ်သူမို့လှူလို့ မရဘူးလေ… မြတ်တဲ့မွေးနေ့ လက်ဆောင်လေးမို့ပြန်တွေးတိုင်း ကြည်နူးစရာနော်…
အသွေးထဲ အသားထဲက ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သဘောဆောင်လို့ မမ မွေးနေ့လက်ဆောင်လေးက ချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။ အကောင်းဆုံးဆုမွန်တွေ ပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုလေးဆိုတော့ ဆုတောင် တောင်းပေးဖို့ လိုမယ် မထင်။
ကိုဧရာ မသီတာ ကဗျာလေးက ကောင်းလွန်းလို့ ကဗျာလေးနဲ့ ထပ်တူ ညီမျှပါပဲ မမ နဲ့ အကိုရေ..
နောက်ကျနေတဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးပါ အစ်မသိဂီင်္ရေ။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါစေ။ ချစ်တဲ့မိသားစုကို ပိုဂရုစိုက်နိုင်ပါစေနော်။
(စကားမစပ် ၁၉၈၈တဲ့.. သားသားတို့အမွေးသေးဝူးးးဂျ)
ဆုတောင်းပေးတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများအားလုံးကို ကျေးဇူး အထူး တင်ရှိပါကြောင်းပါ..
ဘာမုန့်နဲ့မှ ဧည့်မခံလိုက်ရတဲ့အတွက်တော့ ဆောတီးပါ..အဲ..နောင် အပြင်မှာတွေ့တော့မှ တကယ်ကျွေးပါမယ်..ဟဲဟဲ
မွေးနေ့မှာ ဘာလက်ဆောင်ပေးရင် ကောင်းမလဲ စဉ်းစားနေတာ။ အခုတော့အကြံရသွားပြီ။ အဲလိုမျိုး တစ်ခါမှ မစဉ်းစားခဲ့ဖူးဘူး